ओली गुटमा असन्तुष्टि छ, धेरै साथीले विद्रोह गर्नुहुन्छ : किसान श्रेष्ठ [अन्तर्वार्ता]
नेपाल लाइभ सोमबार, साउन ४, २०७८, १६:५८
काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिने कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) श्रेष्ठसहित ८ जना सांसदले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिए। दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दासमेत ओलीलाई साथ दिएका उनीहरुले एकाएक ओलीलाई छोडेपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बन्नपुगेको छ।
तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्दै चर्चामा आएका श्रेष्ठ ओली पक्षमा रहँदै उनको पक्षमा निरन्तर उभिएका थिए। २०७७ वैशाख १० गते जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको ‘अपहरण काण्ड’मा सांसद महेश बस्नेत र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँगै उनी पनि मुछिए। ओलीकै निर्देशनमा ‘अपहरण’ भएको भन्दै सार्वजनिक चर्चा चुलियो, प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरियो।
ओलीले यति धेरै विश्वास गरेका श्रेष्ठ पार्टीले देउवाको विपक्षमा मतदान गर्नू भनि दिएको निर्देशनविपरित विश्वासको मत दिन पुगेपछि नेकपा एमालेका नेता/कार्यकर्ता मात्र होइन, सर्वसाधारण पनि आश्चर्यमा परे। कतिपयले मन्त्री पदका लागि श्रेष्ठले ओलीको साथ छोडेको आरोप पनि लगाइरहेका छन्। हामीले पनि सांसद श्रेष्ठलाई यही प्रश्न सोध्यौं। प्रस्तुत छ, श्रेष्ठसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः-
मन्त्री बन्न विश्वासको मतको पक्षमा लाग्नुभयो भन्ने आरोप लागेको छ, त्यस्तो हो?
होइन, होइन। एउटा कुरा के हो भने १९/१९ पटक मन्त्री फेरबदल हुँदा, आफ्नो दलको एकल सरकार हुँदा त मन्त्री हुन नपाएको मैले अब अहिले पाँच/छ वटा पार्टी मिलेर बनेको सरकारमा मन्त्री हुन्छु भन्ने आशामा या प्रलोभनमा यो विश्वासको मत दिएको होइन। यो क्लियर छ।
तपाईं शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने अवस्थामा चाहिँ किन पुग्नुभयो त?
तनहुँ क्षेत्र १ बाट निर्वाचित भएर आइसकेपछि तत्कालीन नेकपा, नेकपा एमालेको सरकार बनिसकेपछि अविछिन्न रुपमा सरकारलाई सहयोग गरें। संसदमा खेल्नुपर्ने भूमिका राम्रोसँग खेलें। केपी ओली सरकारलाई सफल बनाउन हरेक आरोपहरु खेपें। दुई/दुई पटक संसद विघटन हुँदा पनि ओली पक्षकै वकालत गरेर बसें।
सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि पटक-पटक संसद विघटन गर्नु एकदम गलत हो भन्ने लाग्यो। हामीले संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने काम सर्वोच्चलाई दिएका छौं। उसैले नै संसद विघटन बेठिक हो भनेपछि यो फैसलाको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई भित्री मनबाट लाग्यो। मलाई कसैले दबाब वा प्रलोभन दिएर विश्वासको मत दिने अवस्थामा पुगेको होइन।
के ले काम गर्‍यो त एकाएक?
मैले भित्रि रुपले तनहुँका जनता सम्झिएँ। क्षेत्र नम्बर–१का जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको मतलाई सम्झिएँ। त्यसपछि मैले स्वतःस्फूर्त रुपमा विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हुँ।
अब तपाईंलाई अध्यक्ष ओलीले फकाउनु भयो, आउनुस् जे भो–भो भन्नु भयो भने मान्ने कि नमान्ने?
गल्ती स्वीकार्नु पर्‍यो नि। म भन्दा ठूला नेताहरु हुनुहुन्छ। माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले के भन्नुहन्छ, के गर्नुहुन्छ? त्यस अनुसार होला नि! मैले पार्टी छोडेको छैन। एमालेको सांसद हो। मैले त सर्वोच्चले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको हो। मैले एमाले छाडेको छैन, छाड्दिन।
ओली गुटलाई मात्र छाडेको?
अहिले ओलीलाई पनि छाडेको होइन। अहिले सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा त्यसको सम्मान गरेको हो। तनहुँका जनताको जुन माया, ममता छ त्यसको र भोटको सम्मान गरेको हो।
विश्वासको मतपछि नेकपा एमाले विभाजित हुने अवस्था देखिएको छ, अब तपाईं कता उभिनुहुन्छ?
अहिले पनि मलाई आशा छ, पार्टी एकता हुन्छ। तर, पार्टी एकता भएन भने वा कसैले घर छिर्न दिएन लौरो लिएर लखेट्यो भने जानु परेन?
तपाईं मात्र हो कि अरु पनि हुनुहुन्छ?
त्यहाँ भित्र पिल्सिएका, अन्यायमा परेका असन्तुष्ट धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ। मलाई विश्वास छ धेरै साथीहरु आउनुहुन्छ। त्यहाँ धेरै असन्तुष्टि छ। विद्रोह हुने सम्भावना छ।